Ny New York Times dia mahazo Wordle mihoatra ny 1 tapitrisa dolara | iPhone News
Ny New York Times dia mahazo Wordle mihoatra ny 1 tapitrisa dolara
Misy fotoana tsy maintsy gaga amin'ny vaovao rehetra manodidina ny tontolon'ny teknolojia. Hitanay ny fomba nidiran'i Apple teo amin'ny tontolon'ny lalao video niaraka tamin'ny Apple Arcade, na ny Netflix dia manao toy izany amin'ny alàlan'ny lalao maimaim-poana noho ny famandrihana azy, fa iza no hilaza amintsika ny fahatezerana ateraky ny Wordle. Angamba tsy fantatrao, sarotra, fa ny Wordle dia fahatsapana. 6 manandrana mamaha ny teny misy litera 5, lalao tsotra izay mibodo ny tambajotra sosialy rehetra. Ary mazava ho azy, Nialona ny New York Times ary vao avy nividy Wordle mihoatra ny 1 tapitrisa dolara...
Eny, maro aminareo no ho gaga fa ny fomba fifandraisana toy ny New York Times liana amin'ny lalao ireo toetra ireo. Tsy maintsy miverina amin'ny lasa isika, amin'ny gazety an-tsoratra amin'ny taratasy, Tadidinao ve ny pejy fialamboly? Ny New York Times dia efa ela no nifindra tany amin'ny tontolo iainana virtoaly, raha ny marina dia manana iray amin'ireo famandrihana miaraka amin'ireo mpampiasa be indrindra amin'ny tontolon'ny gazety izy, ary eny. manana fialamboly Tonga mba ho anisan'ny fialam-boly an'ny New York Times i Wordle.
Marina fa manana famandrihana fialamboly ihany koa izy ireo, saingy amin'izao fotoana izao dia mazava tsara izany hijanona malalaka ny lalao, amin'ny farany dia handresy ireo mpampiasa rehetra izay manandrana mahita ny teny vaovaon'ny Wordle isan'andro izy ireo, ary izany rehetra izany dia misy vidiny: tarehimarika fito. Ho hitantsika any aoriana raha noho io fividianana io dia afaka mahita a Fampiharana iOS, fa ny marina dia tsotra sy mampiankin-doha tokoa ny Wordle ka ny fahatsoran'ny fidirana amin'ny tranokala hanaovana an'io "fialam-boly" io no fanalahidin'ny fahombiazany. Fa momba izay ihany, Google Naniry ny hanatevin-daharana ny fahatezeran'i Wordle amin'ny atody Paska ihany koa izy. Mitady Wordle ao amin'ny milina fikarohana ary jereo izay mitranga amin'ny marika famantarana...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny New York Times dia mahazo Wordle mihoatra ny 1 tapitrisa dolara
Ireo no emojis vaovao tafiditra ao amin'ny beta voalohany an'ny iOS 15.4
Tranga tena iray hafa momba ny Apple Watch izay mamonjy ny ain'ny olona iray